> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka HTC Mid ka mid ah X / S / V
The HTC Mid ka mid ah qoyska - HTC Mid ka mid ah X, HTC Mid ka mid ah S iyo HTC Mid ka mid ah V, ayaa la sameeyey iyada oo fikradda ah bixinta camera wanaagsan in qabashada fiican photos xataa xaaladaha xun, inta aad qaadanaysid videos waqti isku mid ah. Waa hagaag, haddii sawiro ama videos waxaa lagu tirtiro si qalad ah oo aan raad raac iyo waxa ay tahay mid aad muhiim ah, waa hab inuu ka soo kabsado iyaga?
Dhab ahaantii, jawaabtu tahay HAA. Marka aad ku badbaadi sawiro iyo videos on kaadhka xusuusta ku qalabaysan aad telefoon u dir, "tirtirto" amarka, waxay micnaheedu ma aha ee photos tirtiray iyo videos lagu weligiis tageen. Kaliya meesha aad ku kaydsan sawiro iyo videos aad ku calaamadeysan yihiin oo bannaan u muqato, iyo faylasha hore u noqdaan aan la arki karin. Weli waxaa jira fursad fiican in aad dib u heli doonaa ka hor inta overwritten.
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray, videos ka HTC Mid ka mid ah X / S / V
First of dhan, waxaad u baahan tahay caawimaad ah qalab kabashada inuu ka soo kabsado photos tirtiray iyo videos ka HTC Mid ka mid ah taxanahan. Haddii aadan haysan doorasho, aan talo noqon kartaa xal: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac (la heli karo Mavericks). Labada of software soo kabashada taageeraan dib u soo kabashada ee HTC Mid ka mid ah X, HTC Mid ka mid ah S iyo HTC Mid ka mid ah V, oo ay ku jiraan sawirrada, video iyo files audio, oo aad u buuxin kartaa in 3 talaabooyin fudud.
Dooro version saxda ah ee computer, oo kala soo bixi version maxkamad free hoos ku hadda.
Fiiro gaar ah: Xusuuso inaad badbaadin natiijada scan haddii aad ku socoto inuu ka soo kabsado faylasha helay ka dib, si looga hortago khasaaro file.
Tallaabada 1. Run barnaamijka HTC Mid ka mid ah soo kabashada on your computer
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo bilaabay barnaamijka aad kombuutarka (qaadashada version Windows sida tusaale), waxaad heli doontaa interface ee aasaasiga ah sida hoos ku qoran. Connect telefoonka HTC in computer oo guji "bilow" in interface ka.
Tallaabada 2. Scan la tirtiro sawiro iyo videos on your HTC Mid ka mid ah
Dooro aad telefoon oo guji "Scan" si aad u hesho sawiro iyo videos tirtiray waxa on. Waxaad isticmaali kartaa "Filter Options" si loo tijaabiyo natiijada scan oo kaliya sawiro iyo videos, haddii aad u baahan tahay.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh helay files oo ka dibna u soo kabsado HTC Mid ka mid ah telefoonada
Halkan, in natiijada scan, waxaad awoodi doontaa in ay ku eegaan mid photos recoverable by mid ka mid ah si loo hubiyo tayada iyaga ka mid ah. Markaas calaamadee sawiro iyo videos aad rabto inaad iyaga oo dhan badbaadin on your computer adigoo gujinaya "Ladnaansho".
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadiyo files soo kabsaday aad HTC Mid ka mid ah telefoon ama kaadhka xusuusta ah. Hubi meel kale si ay u badbaadin sida aad PC ama qalab kale oo lagu kaydiyo dibadda, Ammaanka awgiis.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka HTC Rezound
Sida loo soo dir Facebook Rasuulka Messages, Photos iyo Videos on Android